तर पनि ‘आइ लभ यु ओली बा’ ! - Samadarshi Sanchar
तर पनि ‘आइ लभ यु ओली बा’ !
देशराज नेम्बाङ, शनिबार, ०२ साउन, २०७८, दिउँसोको १२:५५ बजे
बालुवाटारबाट ‘बा’ले बारम्बार ‘ताजा जनमत’को नाममा जनमतकै अवमूल्यन गरे । सार्वभौम संसदलाई निहीत स्वार्थमा दुई पटकसम्म घाट पुर्याए । उनै ‘बा’लाई बालकोट पुर्याउन २ हजार गाडी र २५ सय मोटरसाइकले स्कटिङ गर्ने केटो महेशहरूको ल्याकत देखियो । महेशहरूको पञ्चे र्यालीभन्दा नारायणहिटीबाट नागार्जुन सर्दा माल्दाइको अघिपछि धेर मान्छे थिए ।
प्रधानन्त्रीको रूपमा अन्तिम सम्बोधन गर्दा केपी बाले भनेका थिए– ‘जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, सर्वोच्चको परमादेश शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आयो । जनताको जनादेशले होईन परमादेशले सरकार छोड्दैछु ।’
लाग्न सक्छ– ‘दुनियाँ मेरै पक्षमा छ । दुनियाँले मलाई नै महान भनेका छन् ।’ सायद भ्रमहरू धेरै समय टिक्दैन भन्ने थाहा छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन ताकाको त्यो परिघटना याद आयो– राजतन्त्रविरुद्ध सडक दनदनी बलेको थियो । नारायणहिटीमा काजु बदाम खाँदै बसेका ज्ञानेन्द्रले सोधे– कमल बाहिरको अवस्था के छ ? माल्दाइसँग लमतन्न परेर कमल थापा भन्दै थिए– ‘महाराज केही भएको छैन । सबै हाम्रै पकडमा छ । दुई/चार जना हल्ला गर्दैछन् । हुनेवाला केही छैन ।’ कमलको कुरा सुनेर माल्दाइ गमक्क थिए । तर, केही दिनमै लामो इतिहास बोकेको शाही शासन गर्लम्म ढल्यो ।
बालुवाटारमा काजु बदाम खाँदै बसेका ‘बा’लाई महेश, गोकुल र सुर्यहरूले कमल थापाकै शैलीमा उच्काए र बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याए । जसरी कमलहरूले माल्दाइलाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन पुर्याए ।
ओली ‘बा’ अधिक अहंकारी । भन्दै थिए– ‘‘बन्दुकले ताक्दा नडराएको मान्छे, नाथे अदालतको निणर्यमा म डराउँछु ?’ गल्ती नगर्ने हो भने अदालतसँग डराउनु पर्ने कारण नै हुँदैन । तर, के गर्नु बन्चरो आफ्नै खुट्टामा पर्यो । नपत्याएको खोलाले बगाएर तलै पुर्यायो ।
असार २८ गते न्यायालयले यस्तो बाढी ल्यायो, ‘बा’ बिचरालाई गंगामै पुर्यायो । जहाँ हजारौं ‘बा’हरू अस्तित्व विहीन हुन्छन् । जसरी हजारौं नदीहरू गंगामा पुगेर अस्तित्व गुमाउँछन् ।
‘ओली बा’ अन्तिम सम्बोधनमा भन्दै थिए– ‘अदालतको फैसला अनुचित छ, हाम्रो विरुद्ध छ । संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त छैन । तर जे भए पनि अदालतको फैसलालाई मानेर हामी अगाडी बढ्छौं ।’ तर, ‘ओली बा’ जस्तो तुक नभएको कोही छैनन् जस्तो लाग्छ ।
अदालतको फैसला मान्ने घोषणा गरेको दुई दिन नबित्दै अदालतविरुद्ध देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । रमाईलो त के भने, सरकारमा हुँदासम्म असंवैधानिक कदमहरूबाट देश हाँके । सरकारबाट बाहिरिने बेलामा संवैधानिक कदमको ढोङ पिटे ! सम्झदा पनि लाज मात्र लाग्छ !
बर्हिगमनको क्रममा ‘ओली बा’ले भने– ‘फेरि बादल फाटेर सूर्य उदाउनेछ ।’ सूर्य उदाउनु नियमित प्रकृया हो । बादल फाटेर त सूर्यका किरणहरू मात्र पृथ्वीमा आउने हुन् । तर, बादल नै फाटेन भने नि ?
एमालेको अवस्था हेर्दा बादल फाट्ला झै लाग्दैन । बरु, ‘बा’कै कारण एमाले चाहिँ फाट्ने सम्भावना धेरै छ । एमाले नै फाट्यो भने ‘बा’का सपना र उद्घोष नै अलपत्र पर्ने देखिन्छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा झै, पानीजहाज र पूर्व–पश्चिम रेल जस्तै !
सत्ता उन्मादमा ‘ओली बा’ले जे गरे ती सबै अराजकताको प्रतिफल त आउन थालेको छ । अदालतले त सत्ताबाट मात्र गलहत्यायो । गल्तीहरू नसच्याउने हो भने ‘बा’कै प्रिय शब्द ‘जनमत’ले पनि गलहत्याउनेछ । अर्को सुरेश लिङदेनहरू तयार भएर बसेको कुरा ‘बा’लाई कसैले सुनाए हुन्थ्यो ।
ओली ‘बा’लाई याद होस्, ‘बा’विरुद्ध आदिवासी रंगशालाका चिहानहरूमा मोर्चा बन्दैछ, सुकेटाहरू ओसिलो बनिसकेका छन्, मुकुम्लुङ र खुवालुङहरू साच्चिकै ओलीविरुद्ध चट्टानी अडानमा खडा भइसकेका छन् ।
गलत अर्थ नलागोस् । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मा ओलीलाई दिनु र चोरलाई चाबी सुम्पनु उस्तै भयो । ‘नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो’ भन्ने ओलीको उक्ति बिर्सनु हामी जनताको अन्तिम गल्ती थियो । अब फेरि त्यस्तो गल्ती हुनेछैन । जुन गल्तीले फेरि ओलीहरूको उदय हुनेछ ।
जहाज डुब्दा एक्लै डुब्दैन । जहाजमा भएका सबैलाई सँगै डुबाउँछ । आज ‘बा’ एक्लै डुबेनन्, ‘बा’ले आफुसँगै देश डुबाए, व्यवस्था डुबाए, दुईतिहाइ नजिकको मत डुबाए, अभूतपूर्व कम्युनिष्ट एकता डुबाए । डुबाउन बाँकी त केही छैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले कुनैबेला भनेका थिए– ‘नेपालको राजनीति यस्तो अवस्थामा छ कि पुरानो पुस्ता मरिसक्यो तर, नयाँ पुस्ता जन्मिन बाँकी नै छ ।’
भट्टराई आज भौतिक दुनियाँमा छैनन् । तर, उनको त्यो भनाइ आज पनि सान्दर्भिक छ । आज काकाहरूको पनि पालो आएको छैन । ‘बा’हरूकै समय छ । अर्थात, ओली बा ! ‘केटो’हरूको गन्ति नै छैन ! तर, पनि ‘आइ लभ यु ओली बा !’